ब्लग-टिपिंग: प्राविधिक खुजली | Martech Zone
ब्लग-टिपिंग: प्राविधिक खुजली
ब्लग टिपिंगको लागि सूचीमा अर्को अर्का पाठक हुन् जसले मेरो ब्लगमा एक टन कमेन्ट थप्छन्, टेक्निकल खुजली। कसैले पनि ब्ल्गमा टिप्पणीहरूको मूल्यलाई हल्कासित लिनु हुँदैन (केहीले तर्क गर्दछ कि ब्लग वास्तवमै टिप्पणी बिना ब्लग होईन!)।
टेक्निकल इचले आफ्नो पहिलो जन्मदिन मनाइरहेको छ! बधाई छ !!!
स्तम्भ लेआउटको साथ, तपाइँको सामग्री डिभ लाई तपाइँको एचटीएमएलमा पहिलो राख्नुहोस् (स्थान अझै पनि केन्द्र सामग्री क्षेत्र हुन स्टाइल गर्न सकिन्छ। यसको कारण यो हो कि खोज इञ्जिनहरूले सामान्यत: पृष्ठको सम्पूर्ण सामग्री अनुक्रमणिका गर्दैनन्, शीर्षबाट सुरू गरेर पृष्ठको अंश तान्नुहोस्। सामग्री एचटीएमएल अघि बायाँ साइडबार एचटीएमएल राखेर, तपाईं केवल तपाईंको सामग्रीको भन्दा तपाईंको साइडबारमा अनुक्रमणिका हुन सक्नुहुन्छ!
तपाइँको ब्लग शीर्षक को लागी एक ग्राफिक को उपयोग को लागी महान छ - तर पनी यो संग निश्चित पाठ संग सम्बन्धित छ कि खोज इन्जिनहरु क्रल गर्न सक्छन्। पढ्न निश्चित हुनुहोस् # २ अतिथि ब्लगर ब्लग को लागी मेरो टिपिंग मा। तपाईंको ब्लगको नाम र उप हेडि include समावेश गर्न आवश्यक एचटीएमएल र स्टाईल ट्यागहरू राख्छ।
पृष्ठको खण्ड जति हल्का हुन्छ, त्यसबाट पाठको ध्यान बढाउँदछ। स्तम्भहरू बीचमा हल्का र color्ग फरक भए पनि व्यक्तिहरूलाई स्तम्भहरू सजिलोसँग पढ्न मद्दत गर्दछ ... र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामग्री सुनिश्चित गर्नु सबैभन्दा हल्का भनेको सामग्रीमा ध्यान आकर्षित गर्दछ। मलाई लाग्छ कि म केहि हेडर, साइडबार र पृष्ठ पृष्ठभूमि छायांकनको साथ प्रयोग गर्छु - यदि यो एकदम थोरै भए पनि। यो मापन गर्ने कुरा होईन, तर वेबसाइट पढ्ने बानीमा धेरै अध्ययनहरू छन् जुन यो प्रतिक्रिया प्रदान गर्दछ।
अधिकांश व्यक्तिहरूले यसलाई महसुस गर्दैनन्, तर तपाईं विजेटहरू र फारमहरू शैली गर्न सक्नुहुनेछ जुन अर्को साइटबाट तानिन्छ। यो लेआउट र क्लास ट्यागहरू उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको भेट्टाउने कुरा मात्र हो। म प्रयोग गर्छु फायरबग फायरफक्सका लागि उनीहरूले यो कसरी गरिरहेछन् भन्ने पत्ता लगाउनका लागि - र त्यसपछि केवल मेरो स्टाईलसिटमा ट्यागहरू र शैलीहरू थप गर्नुहोस्।
तपाईंको फन्टको रंग (# 4c8ac9) निलोको ठूलो छाया हो। यद्यपि तपाईको पोष्ट शीर्षकमा प्रयोग गरेर पृष्ठको बाँकी भागले अर्को लिंकलाई फरक गर्दैन। तपाईं एक उपकरण को उपयोग जस्तै गर्न सक्नुहुन्छ Kuler मानार्थ र colorsहरू र छायाँहरू फेला पार्न। यहाँ तपाईंको लागि एक छ (# 234F7D) जुन तपाईंको निलो छायाको भन्दा अलि गाढा छ तर यसले राम्रोसँग बधाई दिन्छ। Kuler प्रयोग गरेर, 'सिर्जना गर्नुहोस्' चयन गर्नुहोस् र केन्द्र रंग HEX रकम सेट गर्नुहोस्। तपाईं त्यसोभए तिनीहरूको सुझावहरूको वरिपरि खेल्न सक्नुहुन्छ वा तिनीहरूको उपकरणहरू प्रयोग गरेर आफैलाई समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटक तपाईं सुरू गरेपछि रमाइलो हुन्छ।
यो यो टिपिंगको लागि हो! मलाई तपाईंको ब्लगमा टेक्नो टेक्नो को गहिरो निस्किने अवसरको लागि अनुमति दिनको लागि धन्यबाद! यो ब्लग तपाईलाई ग्याजेट फिक्ससन, लिनक्स प्रति माया - वा जसले उनीहरूको ब्लगमा ट्रिक गर्ने बारे बढि जान्न चाहान्छन् तपाईका लागि सिफारिश गरिएको हो।
टैग: ब्लग टिपिंगब्लग सुझावहरूप्राविधिक खुजली
केही सरलता प्रयोग गर्नुहोस् र क्याप्चाबाट जोगिनुहोस्
म तपाईको नयाँ श्रृंखलालाई ब्लग टिपिंगमा माया गर्दै छु, डग।
धेरै धेरै, engtech धन्यवाद! मूल सामग्रीको साथ आउन चुनौतीपूर्ण छ, तर गहिराइ खोल्न र काम गर्न यो मजाको कुरा हो।
मेरो ब्लग समीक्षा गर्न समय लिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। प्रतिक्रिया साँच्चै सराहना गरिएको छ।
तपाईंले केहि राम्रा पोइन्टहरू उठाउनु भएको छ। मैले पहिले फन्ट वा पृष्ठभूमि रंगहरूको बारेमा सोचेको छैन। म त्यसलाई हेर्नेछु।
मँ पनि केही समयको लागि मेरो विषयवस्तु परिमार्जन गर्न खोज्दै छु र तपाईंको सबै टिप्पणीहरू बोर्डमा लिन्छु। म तपाईंलाई विकासमा पोस्ट राख्नेछु।
तपाईं शर्त! र - हो - कृपया विकासमा पछाडि पोस्ट गर्नुहोस्।
धन्यवाद, टेक्निकल खुजली!